Smartling: Dudziro Services, Kubatana, uye Maitiro Ekushandisa Software | Martech Zone
Smartling: Dudziro Services, Kubatana, uye Maitiro Ekushandisa Software
Kana kutengeserana kuchimhanyiswa nemashoko, kutengeserana kwepasirese kunowedzerwa neshanduro. Mabhatani, ngoro dzekutenga, uye yerudo kopi. Mawebhusaiti, maemail, uye mafomu anofanirwa kushandurwa mumitauro yakasiyana kuitira kuti mucherechedzo uende pasirese uye usvike kune vateereri vatsva.
Izvi zvinotora zvikwata zvevanhu zvakanyatsogadzirisa yega yega nzira yekuparadzira yezvinyorwa zvemukati; uye zvinodhura kuti zvikwata zvigadzirise mutauro wega wega unotsigirwa. Pinda: Kungwara, dudziro manejimendi manejimendi uye mutauro masevhisi anopa masimba mabhenji nematurusi ekuita zvemukati zvemidziyo uye mapuratifomu. Smartling's Enterprise Dudziro Cloud, nzira inofambiswa nedata kune yenzvimbo, inobvumira vatengi vayo kuzadzisa dudziro yemhando yepamusoro nemutengo wakaderera.
Smartling ndiyo yekushandura chikuva chesarudzo chemazana emhando, kusanganisira Hootsuite, InterContinental Hotels Group, Sprout Social, GoPro, Shopify, NextDoor, Slack, uye SurveyMonkey.
Chii Chinoita Kuti Smartling Ive Yakasiyana?
Dhata-inotungamirwa localization - Smartling haingopa chete vatengi vane chaiyo-nguva dhata nezve yavo dudziro maitiro, asi zvakare ihungwaru zvakakwana kuita sarudzo kwavari.
kushandisa michina - Vagadziri havawanikwe asi shanduro dzinofanirwa kuitwa. Smartling seamless inosangana kune vatengi 'CMS, kodhi repositi, uye kushambadzira otomatiki maturusi kudzikamisa mutoro wekwaunogara.
Chiono chinoonekwa - Vashanduri vanofanirwa kuona mazwi muchirevo kuitira kuti vaburitse basa remhando yepamusoro. Pasina iyo, yekupedzisira-mushandisi chiitiko chinotambura. Shanduro yeSmartling yekushandura inogonesa chero mushanduri kuti anzwisise chirongwa chiripo.
Smartling Machine Shanduro (MT)
Haasi ese mabasa anoda muturikiri wemunhu. Kana zvasvika pakududzira mazwi pachiyero, kushandura muchina ndiyo inokurumidza uye isingadhuri sarudzo. Smartling inosangana neyakasimba uye yazvino injini dzeMT, dzinosanganisira Amazon Dudziro, Google Dudziro, Mushanduri weMicrosoft, Watson Mutauro Dudziro, uye nezvimwe, kubatsira vashandisi kuwana iyo chaiyo MT sevhisi yezvavanoda chaizvo. Smartling zvakare inoregedza neural muchina shanduro yekushandura zvemukati kududziro kune yega yega brand yezwi uye toni nekufamba kwenguva.
Smartling Mutauro Services
Smartling's Dudziro Services inoshandura anodarika mamirioni 318 mazwi gore rega rega kubva pamitauro zana nemakumi mashanu. Iyo kambani inobatsira kugadzirisa rwendo rwevatengi kupfuura makumi mashanu emabhizinesi akasiyana. Smartling inoshandisa yakaoma vetting maitiro, iine chete 150% yevanonyorera vanoitisa kuburikidza, kuve nechokwadi kuti kambani inorevera chete ivo vakanakisa vashanduri kutenderera pasirese. Kana, kana iwe uine vako vashanduri, iwe unogona nyore kuwedzera ivo kune Smartling chikuva uye mukushandura kwako workflows.
Nekutora nzira yakazara kune mari-yekuchengetedza, Smartling's Mutauro Services inoenda zvinopfuura zvemakwikwi ezwi-izwi maitirwo, ichipa tsika-yakavakirwa dudziro zvirongwa zvisina zvishoma zvepurojekiti, uye yakasarudzika yakazara sarudzo dzeshanduro dzinogona kudzora shanduko yekushandisa kusvika kusvika makumi mashanu %.
Smartling Computer-Inobatsira Shanduro (CAT)
Iyo chaiyo yekushandura maitiro inoitika mukati chaimo Smartling, ine yakavakirwa-mukati Computer-Inobatsira Dudziro (CAT) chishandiso. NeCAT yaSmartling, Visual Context inogara ichipihwa vashanduri, zvichiita kuti vashanduri vanzwisise zvirimo zvavanenge vachidudzira, uye kuti mazwi avo anokwana sei mukati mechirevo ichocho. Kana iko kududzira kwacho kwapera, vashanduri vanogona kukurumidza kuenda kune rinotevera basa nekutenda otomatiki nzira.
Smartling inoshandawo kuita kuti basa revashanduri vevanhu rive nyore sezvinobvira zvakare, nekuda kwe:
Chinyorwa Chekuona - Vashanduri vanogona kufano tarisa basa ravo, pane chero fomati
Yechokwadi-nguva Dudziro Yekurangarira
Shanduro Kudzora - Zvemukati zvichangoburitswa zvirimo zvinoonekwa neshanduro, nepo zvinyorwa zvekare zvichiturikirwa kubva mundangariro yaSmartling
Hunhu hweBrand - Zviwanikwa zvedi uye nhungamiro yemhando
Yakabatanidzwa Yemhando Cheki - Real-nguva yemhando cheki inobatsira kuchengetedza nguva yekuverenga zvekare
Keyboard Shortcuts - Sevha nguva pane zvese zviito
Unganidza Tambo - Batanidza zvikamu zvine chete kiyi
Zvichienderana Tag Kubata - Inoshandisa muchina kudzidza kuisa ma tag nenzira kwayo
Otomatiki hwokutiparadza - Smartling inochengeta zvemukati zvichifamba, uye zvinongoerekana zvafamba dudziro yakapedziswa kunhanho inotevera
Nokubatanidza zvakananga nemaitiro aripo uye maturusi - semuenzaniso, kurodha zvirimo kuCMS - Smartling inogonesa vashandisi kugadzirisa maitiro ese akakomberedza iko kushandurwa chaiko. Smartling inokwanisa kusanganisa nechero chero chikuva kana chishandiso icho chako hombe chave kutoburitsa.
Adobe Chiitiko Manager
Mutungamiri mukushandurwa kwegore, Smartling anotora chiitiko chega chega chine chekuita neshanduro yekushandura, achivagadzira kuita anoshandiswa nedhata vatengi vanoshandisa kutyaira hunyanzvi mukati memabhizinesi avo. Kutenda kuVisual Context uye rakasimba runyorwa rwemaotomatiki maficha, vatengi vanoona zvinodhura-zvinoshandura zvemhando yepamusoro, munguva shoma.
Fambisa Nyika neMazwi
Gore rino, Smartling akatanga mushandirapamwe mutsva wekushambadzira unonzi Fambisa Nyika neMazwi. Izvi zvakatanga nepfungwa yekuti kune vanhu vari kuseri kwezvose zvinoitwa nekambani kune vatengi: vashanduri. Saka timu yakashandisa mutori wemifananidzo akasimuka parwendo rwepasirese kunonyora hupenyu uye nyaya dzevashanduri gumi nevaviri veSmartling vanogara pasi rese. Iyo nyaya dzinouya kuhupenyu mune Fambisa Nyika neMazwi kofi tafura bhuku inowanikwa ikozvino.
Makambani anotsvaga kukura uye kubudirira kwepasirese anoramba achitora kufarira kukuru kupa kwedu. Haisi chete vatengi vedu vatsva poindi dzekuzvikudza, asi kukwira kwakakura kwakadaro kweNPS kunoreva zvakaringana sezvazvinoratidza vatengi vedu varipo vane yakanakisa Smartling chiitiko. Zvinotitaurira kuti tinozadzisa zvivimbiso zvedu kune vatengi kana zvasvika pakupa yakanakisa nzvimbo yenzvimbo nehunyanzvi hwekushandura tekinoroji uye vashanduri vanozivikanwa nevatengi vedu uye vova kuwedzerwa kwechikwata chavo. Isu hatingavapo pasina kana.
Smartling co-muvambi uye CEO, Jack Welde
Ronga iyo Smartling Demo
Tags: Adobe Chiitiko Managergfpyepasi rose kuyerera chikuvakushandurwa kwevanhuibm watsonMutauro Wemushandurishanduro yemuchinamitauro yakawandachizvarwa brand ruzivomutauro wekuzvarwamutauro wechisikigodudziro yechisikigosmartlingshandurochinongedzo chekududziradudziro chikuvavashanduri